ကိုယ်လူမျိုး အချင်းချင်း ဒီလိုလုပ်နေတာ.... ကောင်းကြသေးရဲ.လား ? | Shan News ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2'+posttitle+''; document.write(trtd); j++; } document.write('
ကိုယ်လူမျိုး အချင်းချင်း ဒီလိုလုပ်နေတာ.... ကောင်းကြသေးရဲ.လား ?
Posted by shannnews at 6:20:00 PM0comments
စက်တင်ဘာလ၂၈ရက်နေ့ကကျောက်မဲမြို့နယ်၊ မိုင်းတင်းကျေးရွာအုပ်စု နားမွန်းကျေးရွာ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ်သို့ရှမ်းသောင်းကျန်းသူ၁၀ဦးသည်ညနေ၄နာရီ၃၅မိနစ်တွင် ရောက်ရှိလာပြီး နေအိမ် တံခါး အားသေနတ်ဒင်ဖြင့်ထု၍ ဖွင့်ခိုင်းခဲ့ပြီးတံခါးဖွင့် မပေးသောကြောင့်နေအိမ်အား ဗုံးသီး များဖြင့်ဖောက်ခွဲ၍လက်နက်ငယ်များဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့သောကြောင့်သားဖြစ်သူစိုင်းရွှေအောင်ဝဲ လက်မောင်း တွင် လက်နက်ငယ်ကျည်ထိမှန်ပြီးကျောက်မဲပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှု ခံယူနေကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါအဖွဲ့များမှာSSA(၀မ်ဟိုင်း)အဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်းနှင့်SSA(၀မ်ဟိုင်း)အဖွဲ့မှဆက်ကြေးမပေးဆောင်သူနှင့် ၄င်းတို့ ပြောဆိုချက်များအားလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည့်သူများ၏ ကျေးရွာ၊ နေအိမ်များကိုစံနမူနာပြဖြစ်စေရန် ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း ဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။